သက်သေခံ သွားတဲ့ လူငယ်လေး တစ်ဦးရဲ့ပြောပြ တဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခု "စိုင်ဝုန်း မြင်းပျောက်...," by Yadana Oo
by Yadana Oo on Thursday, December 6, 2012 at 10:55am ·
"စိုင်ဝုန်း မြင်းပျောက် ,,,,"
ဘုရားကျောင်းမှာ သက်သေခံ သွားတဲ့ လူငယ်လေး တစ်ဦးရဲ့ပြောပြ တဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခု ဖြစ်ပြီး တကယ်ပဲ ကျမအတွက် ခွန်အားဖြစ်စေခဲ့ လို့ပြန်ပြီး ဝေငှပါရစေ။
Read more: သက်သေခံ သွားတဲ့ လူငယ်လေး တစ်ဦးရဲ့ပြောပြ တဲ့...
အဘယ့်ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ဧဒင်ဥယျာဉ် အလယ်၌ ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုထားခဲ့ သနည်း။ - Nathan Gorrel
လွန်ခဲ့သောစက်တင်ဘာလ ၂၀၁၂ တွင် မယုံကြည်သူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် တစ်ဦးနှင့် အလုပ်ကိစ္စ ခရီးထွက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ တညဉ့်တွင် သူ့ဘာသာနှင့် ကိုယ့်ဘာသာ အကြောင်း အချင်းချင်း မျှဝေကြပြီး အထက်ကမေးခွန်း ပုံစံ မေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့သည်။ မေးခွန်းမှာ “ဘုရားသခင်ဟာလူတွေကိုချစ်လျှက်နှင့် ဘာကြောင့် ဒီလူတွေကို
Read more: အဘယ့်ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ဧဒင်ဥယျာဉ် အလယ်၌...
Iron Cross နဲ့ ချစ်စမ်းမောင်
TKBC , Tokyo-Japan
ရှေးဦးစွာ ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါတယ်။
မမျှော်လင့်ပဲနဲ့ လူဒီလောက်များမယ် မမျှော်လင့်ဘူး။ ကချင်လူမျိုးတွေ နဲ့ မိတ်သဟာရဖွဲ့ခွင့်ရတဲ့အတွက် ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အမ်ဝိုင်စီ MYC (Myanmar Young Crusader) ကပါ။
Read more: Iron Cross နဲ့ ချစ်စမ်းမောင်
လင်မယားတို့သည် နှစ်ဦးမဟုတ်၊ တစ်ဦးတည်းဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်တွဲဖက် ထမ်းပိုးတင်တော်မူသော အရာကို လူတို့မခွဲမခွာစေနှင့်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (ရှင်မာကု ၁၀း၉)
ကွာရှင်းပြတ်စဲရန် တောင်းခံလာသော ဇနီးမောင်နှံကို သင်းအုပ်ဆရာက ငေးကြည့်နေပါသည်။
Read more: မခွဲမခွာအမြဲသာ ဘုရားရှင်တောင်းဆိုသောပူဇော်သက္ကာ
မျက်နှာအလှပြုပြင်ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန် ဒေါက်တာ ရစ်ချတ်ဟာ အသက် ၄၀အရွယ်၊ သန်းကြွယ်သူဌေး တဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ နောက်ဆုံးအဆင့် အဆုပ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားနေကြောင်း သိရပြီးနောက် သူ့ရဲ့ဘ၀အကြောင်းကို ၁၉.၀၁.၁၂ နေ့မှာ သွားဆေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကျောင်းသားများရှေ့မှာ ကိုယ်ကျိုးမငှဲ့ပဲ လူအများအတွက်
Read more: မျက်နှာအလှပြင်တဲ့၊ စင်ကာပူကဆရာဝန်တဦးသက်သေခံချက်..
နားထောာင်ခြင်းဖြင့် .. ခရစ်တော်၏တပည့်တော်ဖြစ်သင်တန်း - ဆရာစံတိုး
ခရစ်တော်အကြောင်း နားလည်ဖို့ ကြိုးစားလေလေ ခက်လေလေပဲ။ ကိုယ့်အစွမ်းအစနဲ့ ကြိုးစားရင် မရပါဘူး။ နားထောင်ပေးရပါတယ်။ နားမလည်ပေမဲ့၊ နားထောင်ပေးရတယ်။ နာကျင်မှုများ၊ အဆင်မပြေမှု၊ ပြသနာများ၊ အခက်အခဲများ ရှိနေရင် ခရစ်တော်အကြောင်း နားထောင်ပေးရပါတယ်။ နားထောင်ရင်း နာကျင်မှု၊အခက်အခဲ၊ ပြသနာ၊
Read more: နားထောာင်ခြင်းဖြင့် .....
ပြန်လာသော သိုးမဲဆိုးများအတွက် မျက်ရည်ကျသည့်၊၀မ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်း
ဆရာတူးဂျာ (MCA Thailand, Bangkok)
ချစ်စမ်းမောင်ရဲ့ ဇနီးသည်၊ မိတ်ဆွေ၃ဦး အနူရွာကို သွားပြီး ဘုရားရှင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဝေငှတဲ့အကြောင်းကို နားထောင်ခဲ့ရပါတယ်။ အနူတွေကြားထဲသွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ ရောက်သွားတာနဲ့ အညှီနဲ့၊ အော်ဂလီဆန်မှုများ ခံစားရပါတယ်။ ကိုယ်ကစကားပြောနေစဉ်မှာပဲ သူတို့
Read more: ပြန်လာသော သိုးမဲဆိုးများအတွက်...
သန့်ရှင်းမှု၊ စင်ကြယ်မှု၊ ဖြောင့်မတ်မှုများ - ဆရာဦးဇော်မင်း (MCA Bangkok)
ဆရာဦးဇော်မင်း (MCA Bangkok)
ဆရာဦးဇော်မင်း Rev, DD MCA Bangkok
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သန့်ရှင်းမှု၊ စင်ကြယ်မှု၊ ဖြောင့်မတ်မှုများတွင် ခရစ်တော်ကို နံပါတ်(၁) တွင်ထားပြီး၊ ကိုးကွယ်၊၀တ်ပြု၊ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တိုက်တွန်းချက် ဒေသနာဖြစ်ပါသည်။ ၀မ်းနည်းခြောက်ခြားဖွယ်ရာ အတွင်းညစ်ငြမ်းမှုများ အပြင်ထွက်လာခြင်းများကို တင်ပြထားပါသည်။ မြန်မာပြည်
Read more: သန့်ရှင်းမှု၊ စင်ကြယ်မှု၊ ဖြောင့်မတ်မှုများ -...
သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ချစ်သုဝေနှင်အင်တာဗျူး
ဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်၊ သရုပ်ဆောင်အဆိုတော်လည်းဖြစ်တဲ့ ချစ်သုဝေဟာ ထရေဇာ လို့ သူမကိုသူမ ပြောတတ်တဲ့ ချစ်စရာ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်လေး တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဇတ်လမ်းတွေရိုက်နေရလို့ မအားလပ်တဲ့ကြားက အချိန်ပေးပြီး သူမရဲ့ လူငယ်ဘ၀ အသက်တာ ခံယူချက်နဲ့ ဘုရားသခင်အပေါ်မှာ ထားတဲ့ သူမရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာ ဘ၀အားဖြင့်
Read more: သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ချစ်သုဝေနှင်အင်တာဗျူး
ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်မှာ တရားဆိုတာရှိပါလား? - စောပက်ထရစ်
ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်မှာ တရားဆိုတာရှိပါလား? တခြားဘာသာတွေမှာပဲ ရှိတယ်လို့ သိကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မိမိအသက်တာ လမ်းခရီးမှာ လမ်းမမှားရအောင် တရားတော်ကို သိဖို့၊ လိုက်နာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နှုတ်ကပတ် တရားတော်၌ မွေ့လျော်သောသူရဲ့ အသက်တာမှာ စိတ်ပျက်စရာအကြောင်း ဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ပါ။
Read more: ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်မှာ တရားဆိုတာရှိပါလား? -...
သားတော်မောင် ယာကုပ်တကောင် ကုတင်ပေါ်တွင် ပတ်ချာလှည့် ဆော့ကစားနေ၍ ကျွန်တော်မနည်း လိုက်ဖမ်းနေရသည်။ ဒီကောင်ကလေးက ရေချိုးပေးပြီးလျင် ထိုသို့ပြုနေကျ။ ရေချိုးပြီးတိုင်း ကုတင်ပေါ်တွင် ရေစိုစိုနှင့် လူးကာလှိမ့်ကာ လှည့်ကာပတ်ကာနှင့် ဆော့ကစားတတ်တာ သူ့အကျင့်။ သူ့ကို ဆွဲဖမ်းလိုက် ခေါင်းကို
Read more: ခရစ်တော်၌ ရှိသောလူ
ခရစ်တော်အကြောင်း နဲ့ ပုံပမာများကို နည်းနည်းရေးချင်ပါတယ် - မောင်သာမန်
ခရစ်တော်အကြောင်း နဲ့ ပုံပမာများကို နည်းနည်းရေးချင်ပါတယ်။
ခရစ်တော်ဆိုတာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို စာတွေ့မဟုတ်ပဲ၊ လက်တွေယူဆောင်လာသူပါ။ သူချစ်တဲ့ လူသားများအတွက် ဘုရားအဖြစ်ကနေ လူအဖြစ် ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ယေရှုဆိုတဲ့ သာမန်လူသားလေးအဖြစ် နှစ်ပေါင်း ၃၀နေပြခဲ့ပါတယ်။ နောက်၃နှစ်ကိုတော့ အံ့သြဘွယ်ရာ
Read more: ခရစ်တော်အကြောင်း နဲ့ ပုံပမာများကို...